Santo Rosario ario ➡ Discover kwi-Intanethi Online ➡️
Irosari Yiyo umthandazo wamakatolika ngokwesiko eyilelwe ukuhlonipha iimfihlakalo ezimashumi mabini zikaYesu Krestu neNtombikazi enguMariya. Icawa ihlala iqonda iziphumo ezizodwa zerosari kwaye, ngokufunda kwayo ekuhlaleni kunye nokusebenza rhoqo, iye yanikezelwa ezona zinto zinzima. Emva koko, siza kuthetha Ingcwele yeRosari kubunzulu obukhulu ngakumbi, hlala nathi apha.
1 Yintoni iRosari eNgcwele?
2 Uyithandaza njani iRosari eNgcwele?
2.2 Umthetho wesivumelwano
2.3 Imfihlelo yokuqala eyonwabisayo
2.4 Imfihlelo yesiBini
2.4.1 UPadre Nuestro
2.4.2 (Thandaza 10 Yibonge uMariya)
2.4.4 UMariya, Mama wobabalo
2.4.5 Owu Yesu wam
2.5 Imfihlelo yesithathu
2.5.1 UPadre Nuestro
2.5.2 (Thandaza 10 Yibonge uMariya)
2.5.4 UMariya, Mama wobabalo
2.5.5 Owu Yesu wam
2.6 Imfihlakalo yesine
2.6.1 UPadre Nuestro
2.6.2 (Thandaza 10 Yibonge uMariya)
2.6.4 UMariya, Mama wobabalo
2.6.5 Owu Yesu wam
2.7 Imfihlakalo yesihlanu
2.7.1 UPadre Nuestro
2.7.2 (Thandaza 10 Yibonge uMariya)
2.7.4 UMariya, Mama wobabalo
2.7.5 Owu Yesu wam
2.8 Iincwadi zeNtombi Enyulu
2.9 Mvana KATHIXO
2.9.1 UPadre Nuestro
2.9.2 1 Dumisani uMariya
2.9.4 Bingelela iNtombi
2.10 Ukuchithwa kokugqibela
Sinokuthi iRosari ngumxholo ovela kwisiLatin «IRosarĭum«. IRosari eNgcwele isetyenziselwa ukubiza uhlobo lomthandazo olwenziwa ngawo onke amaKatolika, kwaye ngendlela efanayo, zizinto ezisetyenziselwa ukuphuhlisa umthandazo omnye. Irosari inokuhlonipha iimfihlelo ezahlukeneyo zeNtombikazi kaMariya neyeNkosi yethu uYesu Kristu. Ndwendwela nebhlog elandelayo, Umthandazo wokubulela uThixo.
Kubalulekile ukuqaqambisa ukuba iimfihlakalo kufuneka zibandakanye imixholo emihlanu, nganye kuzo imele ubomi bukaYesu Krestu neNtombikazi enguMariya, ongumama kaYesu. Kwimowudi yokuthandaza, iirosari imele iiroses ezinikezelwa kwiNtombikazi kaMariya, kwinqanaba ngalinye lakhe. Ezi zimiselwe ngolu hlobo lulandelayo:
NgoMvulo nangoLwesine (iimfihlelo ezimnandi).
NgoLwesibini nangoLwesihlanu (Iimfihlakalo eziLusizi).
NgoLwesithathu, ngoMgqibelo nangeCawa (Iimfihlakalo eziZukileyo).
Uyithandaza njani iRosari eNgcwele?
Ukuba ufuna ukufunda thandaza irosari engcwele ngendlela eyiyo, sicebisa ukuba uthathele ingqalelo oku kulandelayo:
Ukuqala ngomthandazo, kuya kufuneka ucengceleze oku:
Ngophawu loMnqamlezo oyiNgcwele, kwiintshaba zethu, sikhulule Nkosi.
Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.
Ukufunda isenzo sokukrexeza kubaluleke kakhulu, kuba ngayo uya kukwazi ukuqhubeka kwaye uqalise iRosari eNgcwele. Esi sigwebo:
UYesu Nkosi yam
Ndizisola ngesono ngasinye endisenzileyo;
Inzima kum ngentliziyo yam yonke, kuba ndimonile uThixo olungileyo,
Ndiyathembisa ukuba andisayi kuphinda ndone kwakhona
Kwaye ndiyathemba ngenceba yakho engapheliyo ukuba uya kundinika uxolelo
Kwaye kufuneka undikhokelele kubomi obungunaphakade, Amen.
Imfihlelo yokuqala eyonwabisayo
Kwimfihlakalo yokuqala singabona ukuba imalunga nokuzalwa komntwana onguYesu ngunina oyiNtombikazi enguMariya. Emva koko, kuya kufuneka wenze ezi zivakalisi zilandelayo:
Landela ishumi (10) Isichotho Marys.
Thandaza uGloria, a umthandazo kwiNtombi Enyulu yeFatima kunye ne-Ejaculation.
UMariya wahamba ezintabeni de waya kufika kwisixeko saseJudiya, esiya kutyelela uZakariya kunye nomzala wakhe uElizabhete. Xa uElizabhete esiva umbuliso kaMariya, waxhuma yimvakalelo yentsikelelo yomntwana esibelekweni sakhe, ngalo mzuzu uSanta Elizabeth wazaliswa kwaye wasikelelwa nguMoya oyiNgcwele. Ngelo xesha wadanduluka ngovuyo "Usikelelekile wena phakathi kwabo bonke abafazi kwaye sisikelelekile isiqhamo esiswini sakho."
Ukuvuya: Ukutyelelwa kukaMará kumzala wakhe u-Isabel.
Zukisiwe: Ukunyuka kweNkosi ezulwini.
Ebuhlungu: Ukuzithoba kweNkosi.
Ezikhanyayo: Ukuzibonakalisa kukaYesu kumtshato waseKana.
(Thandaza 10 Yibonge uMariya)
UMariya, Mama wobabalo
Owu Yesu wam
UKumkani u-Caesar Augustus wabhengeza ukuba wonke umntu kufuneka abhalise. Uphando lokuqala lwenziwa kwisixeko saseCirino kunye nerhuluneli yaseSyria. Emva koko, uJoseph wagqiba kwelokuba anyuke aye kwisixeko saseNazarete ukuya kuhlangabeza umkakhe uMariya eBhetelehem. Kwakukho ngaloo mihla yokuzala izibulo lakhe. UMaria walusongela olu sana ngezithandelo waza walubeka emkhumbini, kuba babengenandawo ifanelekileyo yokuhlala.
Ukuvuya: Ukuzalwa koNyana kaThixo.
Zukisiwe: Ukuhla koMoya oyiNgcwele kubapostile.
Ebuhlungu: Isithsaba ngameva.
Ezikhanyayo: Isibhengezo soBukumkani bukaThixo.
Ukuvuya: Ukunikezelwa kukaYesu etempileni.
Zukisiwe: Ukunyuka kukaMama wethu ezulwini.
Ebuhlungu: UYesu nomnqamlezo.
Ezikhanyayo: Ukwenziwa kumila kumbi.
Ukuvuya: UYesu ulahlekile wafunyanwa etempileni.
Zukisiwe: Ukuxhonywa kweNtombikazi njengendlovukazi yezulu nomhlaba.
Ebuhlungu: Ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu.
Ezikhanyayo: Iziko le-Ekaristi.
Iincwadi zeNtombi Enyulu
Nkosi, yiba nenceba
Yiba nenceba kuthi.
Ubathathu Emnye Ongcwele,
Mvana kaThixo, ususa isono sehlabathi.
Imvana kaThixo, wena osusa isono sehlabathi.
«Sithandazele, uMama oNgcwele kaThixo.
Ukuze sikulungele ukufikelela kunye nokuzonwabisa ngezithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu. Amen. "
Yenza ngalo mzuzu ungqo umthandazo ozinikele kwinto ofuna ukuyibuza okanye ofuna ukuyithandazela, emva koko, qhubeka noku kulapha ngasentla.
1 Dumisani uMariya
«UThixo akusindise, Queen kunye noMama,
Ubomi, ubumnandi kunye nethemba lethu;
Sikubiza ngokuba ngoonyana bakaEva abathinjiweyo;
Kuwe siyagcuma, sigcuma kwaye silila, kule ntlambo yeenyembezi.
Yiza ke, Madam, ummeli wethu,
buyisela kuthi amehlo akho anenceba;
Emva kokuthinjwa, sibonise uYesu,
isiqhamo esisikelelekileyo sesizalo sakho.
O onobabalo, ohlonel 'uThixo, Onyulu uMariya oyiNtombi!
isono isono sokuqala wamitha. "